FAQ Archives | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Ny fifehezana induction dia fizotran'ny fanafanana izay manatsara ny toetra mekanika toy ny henjana sy ny fikojakojana
ao anatin'ireo fitaovana izay efa mafy fo.
Ny tombony lehibe amin'ny fampidirana amin'ny famonoana ny lafaoro dia ny hafainganana. Ny fampidirana dia afaka manelingelina ny sangan'asa amin'ny minitra, indraindray na segondra aza. Ny lafaoro matetika dia maharitra ora maro. Ary satria ny tempering induction dia tonga lafatra amin'ny fampidirana an-tsokosoko, mampihena ny isan'ny singa ao anatin'ny fizotrany izany. Ny fifehezana induction dia manamora ny fifehezana kalitao ny sangan'asan'ny tsirairay. Ny tobim-pahatezerana miharo fampidirana dia mitahiry ihany koa toerana malalaka.
Ny fifehezana induction dia miasa betsaka amin'ny indostrian'ny fiara mba hifehezana ireo singa henjana ambonin'ny tany toy ny hazo, bara ary tonon-taolana. Ny fizotrany dia ampiasaina koa amin'ny indostrian'ny fantsom-by sy ny fantsom-panafody mba hanoherana ireo sanganasa miasa mafy. Inditing indraindray dia tanterahina ao amin'ny gara mihamafy, indraindray amin'ny toerana iray na maromaro.
Ny rafitra HardLine feno dia mety amin'ny rindranasa fampandeferana maro. Ny tombony lehibe amin'ny rafitra toy izany dia ny fanamafisana sy ny fanamafisana ataon'ny milina iray. Ity dia manome fotoana be dia be sy tahiry amin'ny dian-tongotra kely raha oharina amin'ny teknolojia hafa. Amin'ny lafaoro, ohatra, ny fatana iray matetika dia manamafy ny sangan'asa, amin'ny lafaoro mitokana
avy eo ampiasaina amin'ny fifehezana. Ny rafitra mafonja DAWEI Induction Heating Systems dia ampiasaina amin'ny fampiharana an-tsokosoko ihany koa.
Sokajy FAQ Tags ny hafanana be loatra, induction tempering, induction tempering, Fomba fitsaboana RF, tempering, fanasitranana fanasitranana